Nhau - Ndeapi maitiro eiyo infrared, bluetooth uye isina waya 2.4g kure kudzora?
Ndeapi maitiro eiyo infrared, bluetooth uye isina waya 2.4g kure kudzora?
Infrared remote control: infrared inoshandiswa kudzora michina yemagetsi kuburikidza nemwenje usingaonekwe senge infrared. Nekushandura infrared mwenje kuva madhijitari anonongedzwa nemidziyo yemagetsi inogona kuona, iyo yekumusoro control inogona kure kudzora emagetsi magetsi kure kure. Nekudaro, nekuda kwekukamurwa kweiyo infrared, iyo infrared remote control haigone kupfuura nemumipingo yeremote control kana kure kudzora chishandiso kubva kune yakakura kona.
Infrared remote control inogona kunzi ndiyo inonyanya kushandiswa mhando yekure kure kure mumhuri medu. Iyi mhando yeremote control ine yakaderera yekugadzira mutengo, yakasimba kugadzikana, uye haidi mamwe marongero. Uye zvakare, yedu infrared remote control iri kutadza kushanda, uye zviri nyore kuwana inotsiviwa neremote control. Nekudaro, iri zvakare nekuti iyo infrared chiratidzo haina kunyorwa. Kana zvishandiso zvakawandisa zverudzi irworwo zvakaiswa munzvimbo, zviri nyore kushandisa iyo imwecheteyo remote control kudzora akawanda madhizaini panguva imwe chete, izvo dzimwe nguva zvinounza kusagadzikana pabasa redu.
Bluetooth Remote control: YeBluetooth, isu tichafunga nezve zvigadzirwa zvayo seBluetooth mahedhifoni, nharembozha, makomputa, uye mbeva nekhibhodi zvikamu zvemakomputa zvine hutachiona hweBluetooth, asi hazvishamise kushandisa mumidziyo yemumba.
Kubatsira kweBluetooth yekudzivirira kure ndeyekuwana yakazvimiririra yakasarudzika yekuparadzira chiteshi chiteshi kuburikidza pairi neTV, nekudaro ichidzivirira kupindirana pakati peasina waya masaiti emidziyo yakasiyana. Uye nekuti kufambisa chiratidzo cheBluetooth kwakanyatsonyorwa, hatifanirwe kunetseka nezve chiratidzo chinotapuriranwa chiri kuwanikwa nevamwe. Sekuwedzera kune 2.4GHz tekinoroji, Makaralı ari kure kudzora zvakare chiitiko chekuvandudza.
Parizvino, iyo Bluetooth remote control ine zvakare mamwe matambudziko. Semuenzaniso, zvinodikanwa kuti ubatanidze nemaoko kure kure nemuchina paunenge uchiishandisa kekutanga, kunonoka kwekushandisa kwechigadzirwa kwakakwira, uye mutengo wakakwira. Aya ndiwo matambudziko anodiwa neBluetooth kugadzirisa.
Wireless 2.4g kure kudzoreredza: Wireless 2.4g kure kudzora kuri zvishoma nezvishoma kuve kunozivikanwa pakati peTV kure masimba. Iyi nzira yekuregedza yekutumira chiratidzo inobudirira kugadzirisa kusakwana kweiyo infrared remote control, uye inogona kudzora TV zviri kure kubva pamakona ese ari mumba. Kusanganisira iyo yazvino inowanda isina waya mbeva, isina waya khibhodi, isina waya mutambo wepadhi, nezvimwewo vese vari kushandisa iyi mhando yeremote control.
Inofananidzwa neyechinyakare infrared remote control, iyo isina waya 2.4g yekudzivirira kure inobvisa iro dambudziko rekutungamira. Tinogona kushandisa kure kure kushandisa chishandiso chero chinzvimbo uye chero pakona mumba tisinganetseke nezvedambudziko iro mudziyo risingakwanise kugamuchira chiratidzo. Ichi chaicho chikomborero chekure kure nemhepo mashandiro emhepo. Uye zvakare, iyo 2.4GHz chiratidzo chekufambisa bandwidth yakakura, iyo inobvumidza iyo yekumusoro kutonga kuti iite zvakanyanya kuomarara mashandiro, senge izwi uye somatosensory mashandiro, izvo zvinoita kuti iyo yekuremera ruzivo ruwone kunyange zvirinani.
Nekudaro, iyo isina waya 2.4g yekudzivirira kure haina kukwana. Nekuti iyo chiratidzo cheWiFi chatinoshandisa chiri zvakare mune iyo 2.4GHz frequency band, kana paine akawanda michina, 2.4GHz zvishandiso dzimwe nguva zvinokanganisa neWiFi, nokudaro zvichideredza kure kure kudzora mashandiro. Akarurama. Nekudaro, iyi mamiriro anozoonekwa chete munzvimbo dzakanyanyisa, uye mushandisi mushandisi haafanire kunetseka zvakanyanya.